Mibvunzo - FAQ - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co, Ltd.
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekugadziriswa kwema ebikes uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tinokutumira iwe yakagadziridzwa yemutengo runyorwa mushure mekambani yako kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Ehe, isu tinoda ese maodha epasi rese kuti ave neinoramba ichienderera shoma odha huwandu. Kugamuchirwa kuva mutengesi wedu kana mumiririri.
For ivhu, kutungamirira nguva anenge mazuva gumi nemashanu. Zvekugadzirwa kwakawanda, iyo inotungamira nguva ndeye 30-60 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti kubhadhara Nguva dzekutungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana nguva dzedu dzekutungamira dzisingashande neyakafa yako, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.